1. Yini ebalulekile ekubhakeni Inikeza ubukhulu obuhle bombala Futhi engeza ubumnandi ekunambithekeni okuphelele Ingabe ushukela ophakeme Kodwa uyakukholwa lokho Ubani ongacabanga ukuthi kulula kakhulu, futhi ungathatha kalula wonke amathuluzi onawo ekhaya lakho, ekhishini, uwasebenzisele ukufafaza kahle amakhekhe akho futhi ubenze baziqhenye ngalokho. Kuyinkqubo yangempela eyenziwe ekhaya. Ukuthi isivivinyo senjabulo noma ubani ofuna imali eyengeziwe ngokubhaka. Masikwenze ukunciphisa izindleko ngasikhathi sinye kangcono.
2. Uyini ushukela we-icing? Ushukela ngempela obelokhu ngenqubo enhle yokugaya. Ukubukeka kuyimpuphu emhlophe Iqukethe cishe u-3% we-cornstarch futhi isetshenziswa njengesithako sokukhipha izimpahla ezibhakiwe. I-watermark yinhle ngaphandle kwezimpawu ezisalile. Kuyinhlanganisela kakhilimu ukuhlobisa amakhekhe, ama-donuts nokwenza onodoli ukuhlobisa kahle ama-dessert. Okubaluleke nakakhulu, kulula ukukwenza wedwa, usiza ukunciphisa izindleko zokuthenga izinto zokusetshenziswa. Kulula ukuthola, kulula ukwenza ngezithako ezilandelayo:
3. Kunezithako ezi-3 kuphela ezitholakala kuyo yonke indlu ekwenzeni ushukela we-icing: ama-gramu ayi-150 kashukela.
4. Ngama-gramu ayi-11 wesitashi sommbila ne-blender
5. Kusukela kushukela. Thela ku-blender Bese ujikeleza kahle Ngokusebenzisa isikhathi sokuphotha, hhayi isikhathi eside, cishe imizuzwana engama-20-30
6. • Bese uhlola ukuthi ushukela ohlanganisiwe ulungile yini noma cha. Uma kusekhona noma yimaphi amaphilisi, wajikele futhi. Kuze kube ilungile, ibukeka njengempuphu encane. • Lapho ushukela uhlanganiswe kahle. Bese ufaka isitashi samabele esilinganisweni esishiwo ngenhla. Hlanganisa zombili izithako ndawonye cishe imizuzwana engu-10.
7. • Bheka ukuthi izithako zihlanganiswe kahle nempuphu yesandla ecolekile. Kuphelile. Bese igcinwa esitsheni esivaliwe. Ukuze usebenzise kalula
8. Faka ubumnandi nokufudumala kusuka uqweqwe olwenziwe ekhaya. Ngoba ukudla kuphathelene nokukhethwa kwezithako ezinhle Uma sikwazi ukukhiqiza izinto zokusetshenziswa Noma kusetshenziswe ekudleni esikwenze ekhaya Ngaphezu kokuba nokunambitheka okuyingqayizivele Yazi umsuka Kuyasiza futhi ekwehliseni izindleko ngoba kuyinto engatholwa eduze kwalowo mkhosi wokubhaka. Masenze ushukela wokhilimu Hlobisa amakhekhe noma amaqebelengwane ngokwawo Vumela abantu abadlayo bazi ubumnandi esibukhathalelayo ukukwenza lokho Futhi kufihlwe ngothando, ukunakekelwa nemfudumalo Kuwo wonke ama-molecule kaswidi izingubo ezihlotshiswe kahle Noma ukumema izingane ukuthi zenze onodoli futhi zenze amakhekhe konke kuyizinto ezakha izinkumbulo. Futhi uyamamatheka nomndeni Ngaphezu kobumnandi obunambitheka